नारी दिवसका अवसरमा विचार गोष्ठी « Deshko News
नारी दिवसका अवसरमा विचार गोष्ठी
“नारी र पुरुषबिचको सहअस्तित्व र अन्तरसम्बन्ध प्रगाढ बने मात्रै जीवन सफल र सुमधुर हुन्छ” नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीले प्रतिष्ठानको समालोचना तथा निबन्ध विभागद्वारा १०७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा आयोजित विशेष विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उक्त कुरा बताउनु भएको हो ।
‘नारी र पुरुष अन्तरअस्तित्व सम्बन्धि अवधारणा र साहित्यमा त्यसको प्रभाव’ विषयक विशेष विचार गोष्ठीमा बोल्दै प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. विष्णुविभु घिमिरेले “नारी र पुरुष सँगसँगै जानुको विकल्प नरहेको” धारणा व्यक्त गर्नु भयो ।
उहाँले बुद्धदर्शनको उक्ति उद्यृत गर्दै नारी र पुरुष अन्तरअस्तित्वमा जोड दिनु भयो, “यदि यो छ भने त्यो छ, यदि यो छैन भने त्यो छैन ।”
गोष्ठीमा प्राज्ञ एवम् कवि श्रवण मुकारुङले ‘आइमाई’ शीर्षकको कविता र कलाकार हरिवंश आचार्यले ‘तिम्रो माया उनान्सय मेरो माया सय…’ बोलको गीत सुनाउनु भएको थियो ।
सो अवसरमा कुलपति उप्रेतीद्वारा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले प्रकाशन र प्रा.डा. कुमारप्रसाद कोइराला र रत्नमणि नेपालले सम्पादन गरेको ‘नेपालका नारी साहित्यकार’ नामक परिचय कोश विमोचन गरिएको थियो ।